Ny iMac M1 voalohany namboarina dia manomboka hita ao amin'ny Apple Store | Avy amin'ny mac aho
Ireo iMac M1 voalohany namboarina dia manomboka hita ao amin'ny Apple Store
Ny vaovao 24-inch iMac Apple Silicon dia natomboka tamin'ny tsena tamin'ny volana aprily. Eny, ny singa amidy voalohany naverina amidy dia efa nanomboka nipoitra tao amin'ny Apple Store, na amin'ny tranokala US na UK.
Fantatsika rehetra fa safidy indraindray ny fividianana fitaovana reconditioned ao amin'ny Apple Store ofisialy. Afaka manangona vola kely ianao, ary fantatrao fa ny orinasa dia nanitsy azy tanteraka ary manome anao izany vaovao. Ny hany zavatra miova dia ny boaty ivelany. Ka raha mieritreritra mitady iMac M1 nohavaozina ianao dia miandry andro vitsivitsy satria efa manomboka miseho ao amin'ny Apple Store ny singa sasany. Ho an'ny boloky!
Efatra volana monja taorian'ny nanombohan'ny Apple ny iMac voalohany Processeur M1, ary ireo singa voalohany reconditioned amidy ao amin'ny tranokalan'i Apple dia manomboka miseho.
Amin'izao fotoana izao dia niseho tao amin'ny tranokalan'i US ary ny United Kingdom, saingy fantatsika rehetra fa tsy ho ela izy ireo dia hiseho amin'ny firenena rehetra. Sambany nipoitra ny singa voalohany an'ny iMac 24 nohavaozina nohavaozina hatramin'ny nanombohany ny volana aprily.
Ka raha mieritreritra ny hividy ilay iMac 24-inch vaovao ianao ary tsy mampaninona anao fa averina indray io dia afaka mandeha mijery ny tranokalan'ny Apple Store ianao ao amin'ny faritra misy azy reconditioned. Ny tahiry dia mety miankina amin'ny maodely, saingy azo antoka izany eo anelanelan'ny 200 sy 300 Euros raha oharina amin'ny vidin'ny fitaovana vaovao iray ihany.
Ny iMac M1 an'ny Apple nohavaozina dia amidy mitovy amin'izany ihany koa antoka iray taona Natolotra tamina fitaovana vaovao izy io, miampy ireo boky sy bokikely ao anaty boaty. Apple dia mampiasa fizahan-toetra henjana, fanamboarana, famerenana entana ary fanadiovana mba hahazoana antoka fa ireo fitaovana nohavaozina dia mitovy amin'ny fitaovana vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Ireo iMac M1 voalohany namboarina dia manomboka hita ao amin'ny Apple Store
Apple Store any Charleston, South Carolina, mihidy noho ny COVID-19
Ilay BMW i4 mandeha amin'ny herinaratra rehetra izay hifanaraka 100% amin'ny Apple Watch